ကမ႓ာ့တိုက်ကြီးသုံးခုမှ ဘွဲ့ရမည့် အစီအစဉ် - Lamar University, Texas
ကမ႓ာ့တိုက်ကြီးသုံးခုမှ ဘွဲ့ရမည့် အစီအစဉ်
အော်ရီဂွန် နိုင်ငံတကာပညာရေး အဖွဲ့အစည်း (Oregon Institute of International Education)၊ Siam နည်းပညာကောလိပ်၊ NVQ အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့်အတူ Lamar University သည် ကမ႓ာ့တိုက်ကြီးသုံးခုမှ ဘွဲ့ရမည့် ပညာရေး အစီအစဉ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင် သင်ကြားပါသည်။ Lamar University သည် Texas ပြည်နယ် တက္ကသိုလ်များ အဖွဲ့အစည်းတွင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကာ ပူးတွဲဘွဲ့၊ ဘွဲ့ကြို၊ မဟာဘွဲ့နှင့် ပါရဂူဘွဲ့များ ပေးအပ်ရန် တောင်ပိုင်း ကောလိပ်များအသင်း (Southern Association of Colleges) နှင့် ကောလိပ်ကျောင်းများဆိုင်ရာ ကော်မရှင် (Schools Commission on Colleges) တို့က အသိအမှတ် ပြုထားပါသည်။ အော်ရီဂွန် နိုင်ငံတကာ ပညာရေး အဖွဲ့အစည်း သည် U.S. 501(c)(3) အကျိုးအမြတ် မယူသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဆရာဦးရေ ၃၀၀၀၀ ရှိကာ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ Lamar University ၏ အရည်အသွေးကို ကြီးကြပ်လျက် ရှိပါသည်။ Siam နည်းပညာကောလိပ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အသိအမှတ် ပြုထားပါသည်။ NVQ သည် ယူကေနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားအဆင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာအရည်အချင်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။
ဤကဲ့သို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအကြောင်းကို Lamar University Press Release သတင်းထုတ်ပြန်ချက် တွင် ဖတ်ရှုလိုက်ပါ။
ကမ႓ာ့တိုက်ကြီးသုံးခုမှ ဘွဲ့ရမည့် အစီအစဉ်တွင် သင်ကြားမည့် ကျောင်းသားများသည် စာသင်နှစ်လေးနှစ် ပြီးဆုံးချိန်တွင် ကမ႓ာ့တိုက်ကြီးသုံးခုမှ အောက်ပါဘွဲ့လက်မှတ်များကို ရရှိပါမည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ တက္ကဆက် ပြည်နယ်ရှိ Lamar University မှ ချီးမြှင့်မည့် ယဉ်ကျေးမှုယှက်နွှယ် ခေါင်းဆောင်မှု ဝိဇ္ဇာဘွဲ့
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စီးပွားစီမံဘွဲ့ဘန်ကောက်မြို့ရှိ Siam နည်းပညာ ကောလိပ်မှ ချီးမြှင့်မည့်
ဗြိတိသျှ အမျိုးသား အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာအရည်အချင်း စနစ်မှ NVQ အဆင့် ၅ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာ
ဘာသာရပ် တစ်ခုချင်းစီကို ထောက်ခံအတည်ပြု ထားပြီး ကမ႓ာတစ်ဝန်း၌ အသိအမှတ် ပြုပါသည်။
ဘန်ကောက်မြို့တွင် သင်ကြားသည့် အစီအစဉ်ကို အော်ရီဂွန် နိုင်ငံတကာ ပညာရေး အဖွဲ့အစည်း မှတစ်ဆင့် အမြဲမပြတ် အရည်အသွေး ကြီးကြပ် နေပါသည်။
ဘာသာရပ်သင်ကြားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်း များစွာ အတွေ့အကြုံများစွာရှိသော အနောက်တိုင်း ပညာရှင်များရှိပါသည်။
စာသင်ခန်းများတွင် ကျောင်းသား အရေအတွက် ၂၅ ယောက်သာ လက်ခံထားရှိပါသည်။
လေးနှစ်တာ ပညာသင်နှစ်အတွက် US$ 20,000 (ငွေကြေး ပြောင်းလဲရန်). ဖြစ်သည့်အတွက် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာပါသည်။ ပညာသင်နှစ်ဝက် တစ်ခုလျှင် စီမံအုပ်ချုပ်မှုစရိတ် US$ 250 နှင့် ဘာသာရပ် သင်တန်းကြေး US$ 2,250 ခန့် (ဘာသာရပ် တစ်ခုလျှင် US$ 450)။ ခရက်ဒစ် တစ်ခုလျှင် ကုန်ကျစရိတ်သည် US$ 150 (ခရက်ဒစ် 120)။
အာဆီယံ ဦးစားပေးစနစ် (ASEAN FIRST) ကျောင်းသူကျောင်းသားများ အတွက် စုစုပေါင်း ကုန်ကျစရိတ်သည် US$ 15,500 သာရှိပါသည် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ)။
ဒုတိယနှစ် ပြီးပါက ကျောင်းသူကျောင်းသား များသည် Beaumont, Texas ရှိ Lamar University တွင် ပညာသင်နှစ်ဝက် တစ်ခုမှ လေးခုအထိ (ကုန်ကျစရိတ် မပါဝင်ပါ) တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
အော်ရီဂွန် နိုင်ငံတကာ ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းသည် အမေရိကန်တွင် အလုပ်နှင့် ခရီးသွားခြင်း ၅ လတာ အစီအစဉ်ကို စီမံအုပ်ချုပ်မှုစရိတ်အားလုံး အခမဲ့ စီစဉ်ပေးပါသည်။ အလုပ်မှရရှိသော ဝင်ငွေဖြင့် လေယာဉ်စရိတ်၊ ထိုကာလအတွင်း နေရာထိုင်ခင်းနှင့် နေထိုင်မှုစရိတ်တို့ကို ကာမိနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံပေါင်းများစွာမှ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ လာရောက်သည့်အတွက် သူတို့၏နေ့စဉ် ဆက်သွယ်ပြောဆိုသည့် ဘာသာစကားမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဖြစ်လာပါသည်။
ကမ႓ာ့တိုက်ကြီးသုံးခုမှ ဘွဲ့ရမည့် အစီအစဉ်သညည် မော်ဂျူးအလိုက် ဘာသာရပ် သင်ကြားရေးစနစ် ဖြစ်သည့်အတွက် ကျောင်းသူကျောင်းသားများက တစ်နှစ်ပတ်လုံး လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ မည်သည့် လတွင်မဆို စတင်ပညာသင်ကြားနိုင်ပါသည်။ အွန်လိုင်း လျှောက်လွှာပုံစံ ကို အသုံးပြုပါ။
လျှောက်ထားသူသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ကောင်းစွာ ကျွမ်းကျင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အောက်ပါ ဝင်ခွင့်သတ်မှတ်ချက် တစ်ခုခု ရှိရန်လိုပါသည်။
သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ် အောင်မြင်ထားသူ
သို့မဟုတ် GED (သို့မဟုတ် အလားတူ)
နိုင်ငံခြားသား ကျောင်းသားများ ဘန်ကောက်မြို့တွင် ပညာသင်ကြားမှု ကုန်ကျစရိတ်
မြို့ပေါ်ရှိ ကျောင်းဝင်းများတွင် စာသင်ကြားပါသည်။ ကျောင်းဝင်းအနီးဝန်းကျင်တွင် သန့်ရှင်းပြီး စိတ်ချရသော နေရာထိုင်ခင်းများ တစ်လလျှင် US$ 100 မှစပြီး ရှိပါသည်။ စျေးသက်သာလိုပါက အခန်းဖော်ကျောင်းသားနှင့် မျှဝေနေထိုင်နိုင်အောင် အခန်းများကို ပြင်ဆင်ထားပါသည်။
အစားအသောက်အတွက် ကျောင်းသားများ၏ ပြောပြချက်အရ တစ်လလျှင် နောက်ထပ် US$ 100 ကုန်ကျနိုင်ပါသည်။ ကျောင်းကန်တင်းမှ စျေးသက်သာသော ဆိုင်များကြောင့် အကုန်အကျသက်သာနိုင်ပါသည်။
အဆင့်မြင့်မြင့် နေလိုလျှင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ပိုမိုကုန်ကျပါလိမ့်မည်။
Our 2019 Initiative: ASEAN FIRST! ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျဖစ္သည့္ အာဆီယံ ဦးစားေပးစနစ္ (ASEAN FIRST)
Our ASEAN FIRST initiative aims to help students from the ASEAN countries to getahigh-quality, affordable western university education. ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အာဆီယံ ဦးစားေပးစနစ္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ အရည္အေသြး ျမင့္မားၿပီး ကုန္က်စရိတ္သက္သာေသာ အေနာက္တိုင္း တကၠသိုလ္မ်ားမွ ပညာေရးကို အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား ရရွိေအာင္ အကူအညီေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
For the first two years of your studies, you geta50 percent scholarship, meaning you pay only half the tuition and admin fees. In year three and four, you pay the full fees if you want to study for the U.S. degree issued by Lamar University and the NVQ Level5Diploma from the U.K. သင္၏ ပညာသင္ကာလ ပထမ ႏွစ္ႏွစ္အတြက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပညာသင္ဆု ရရွိပါမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေက်ာင္းလခႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစရိတ္ ထက္ဝက္ကိုသာ ေပးရပါမည္။ တတိယႏွစ္ႏွင့္ စတုတၳႏွစ္တို႔တြင္ Lamar University မွ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ အေမရိကန္ဘြဲ႕လက္မွတ္ႏွင့္ ယူေကမွ NVQ အဆင့္ ၅ ဒီပလိုမာလက္မွတ္အတြက္ သင္ယူလိုပါက ေက်ာင္းလခ အျပည့္ေပးရပါသည္။
We all know that financial conditions sometime change. If you cannot afford the higher fee for year three and four, you can go on with the half-fee and study for the B.B.A. in your chosen major issued by Siam Technology College. Even then, you will stay in the Lamar class and learn with the same students from the same teachers in the Lamar program! အားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္း ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေနမ်ားက တစ္ခ်ိန္ႏွင့္တစ္ခ်ိန္ မတူညီပါ။ တတိယႏွစ္ႏွင့္ စတုတၳႏွစ္တို႔အတြက္ ေက်ာင္းလခ ပိုမ်ားလာသည္ကို သင္မတတ္ႏိုင္ပါက Siam နည္းပညာ ေကာလိပ္မွ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ သင္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေမဂ်ာအတြက္ B.B.A. ဘြဲ႕ရေအာင္ ထက္ဝက္ ေက်ာင္းလချဖင့္ ဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါမွာလည္း Lamar စာသင္ခန္းမွာပင္ ဆက္လက္တက္ေရာက္ကာ Lamar ပညာေရး အစီအစဥ္မွ ဆရာမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အတူတကြ သင္ယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
နောက်ထပ် သိရှိလိုပါက ulrich@siamtechnologyinternational.com to ထံသို့ အီးမေးလ်ပို့ပါ သို့မဟုတ် အောက်ပါ Facebook စာမျက်နှာများမှ တစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ Facebook Messenger ဖြင့် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများ အတွက် Facebook စာမျက်နှာ
ဖိလစ်ပိုင် ကျောင်းသားမျာအတွက် Facebook စာမျက်နှာ
ကမေ႓ာဒီးယား ကျောင်းသားများအတွက် Facebook စာမျက်နှာ
အစီအစဉ် ပိုစတာစာရွက် (PDF ) ကို ဒေါင်းလုတ် ရယူပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ထံ ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီး လက်ရှိ တက်ရောက်နေသော ကျောင်းသားများနှင့် စကားပြောဆိုရန် အလေးအနက် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ရက်ချိန်းယူရန်အတွက် Mr. Bryce Hunter ထံ bryce@siamtechnologyinternational.com သို့မဟုတ် ဖုန်းနံပါတ် +66 (0)94 662 5598 တို့ဖြင့် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။